ရေတံခါးအဆို့ရှင် China Manufacturers & Suppliers & Factory
 လျ：86-576-87427772 အီးမေးလ်ပို့ရန်：kingsir@cn-kingsir.com
Stop Valves များ
အဆို့ရှင် ( 344 )
Stop Valves များ ( 59 )
ဘောလုံးအဆို့ရှင် ( 90 )
ဘောလုံးကြက် (3)
ထောင့်အဆို့ရှင် ( 35 )
ဂိတ်အဆို့ရှင် ( 44 )
ဓာတ်ငွေ့အဆို့ရှင် ( 14 )
သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းများ ( 67 )
ဝှမ်းပုတ် ( 24 )
သောက်သုံးရေ Faucets (2)
ခေါင်းအုံး ( 17 )
နစ်မြုပ်နေသောအရောများ ( 8 )
ရေနုတ်မြောင်း ( 8 )
ရေချိုးပုတ် ( 8 )
ပိုက်လျောက်ပတ် ( 69 )
ရေတံခါးအဆို့ရှင် - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
(3များအတွက်စုစုပေါင်း ရေတံခါးအဆို့ရှင် ထုတ်ကုန်များ)
ရေနံ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ရေတံခါးအဆို့ရှင်
Supply နိုင်ခြင်း: 10000000 PER MONTH
ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် အနုပညာ ကျပ် ၃၂၉ ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် F / F အရွယ်အစား: 1/2 ", 3/4", 1 ", 1 1/4", 1 1/2 ", 2" အင်္ဂါရပ်များ: 1. ပူစာနယ်ဇင်းခန္ဓာကိုယ် ၂ ။ အလုပ်လုပ်ဖိအား 30 bar ကို (PN-30) ။ 3. Thread သည် NPT အမျိုးသမီး - အမျိုးသမီးလုပ်ရပ် / ANSI / ASME B ကို ၁.၂၀.၁ အထိအဆုံးသတ်သည် 4....
Supply နိုင်ခြင်း: 100000 PER MONTH
min ။ အမိန့်: 5000 Bag/Bags
ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် Art.8010 ကြေးဝါတံခါးအဆို့ရှင် F / F အရွယ်အစား: 1 / မှ 2, 3/4, 1 အင်္ဂါရပ်များ: 1. ဂိတ်အဆို့ရှင်။ ၂ ။ အလုပ်လုပ်ဖိအား 20 ဘား (PN-20) ။ 3. Thread သည် NPT အမျိုးသမီး - အမျိုးသမီးလုပ်ရပ် / ANSI / ASME B ကို ၁.၂၀.၁ အထိအဆုံးသတ်သည် 4. Stuffing box: PTFE ။ ရေပူ၊ ရေအေးနှင့်ဆီအမျိုးမျိုးအတွက်သင့်တော်ပါသည်။ 0...
အရွယ်အစား - ၁ / ၂'-၁၁ / ၂ 'မှ ပစ္စည်း: ကြေးဝါ အင်္ဂါရပ်များ: 1. ဂိတ်အဆို့ရှင်။ 2. အလုပ်လုပ်ဖိအား: 16 bar ကိုမှ 25 bar ကို ၃။ အပူချိန်အလုပ်လုပ်မှု - -20 ဒီဂရီမှ 110 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် 4. Thread အမျိုးသမီး - အမျိုးသမီး NPT ချည်အဆုံးသတ်ထားသည် 5. Stuffing box ကို PTFE ။ 6. သံမဏိခြယ် handwheel ။ 100% Air...
အမြန် connector ကို plating နီကယ်
Forge Gate အဆို့ရှင်
အနက်ရောင် manuel ကြေးဝါကိုရပ်တန့်အဆို့ရှင်
Hot sale ရေချိုးခန်းဆို့ရှင် Valve
ရေတံခါးအဆို့ရှင် ရေနံတံခါးအဆို့ရှင် ရေအဘို့အဆို့ရှင် ရေအတွက်အဆို့ရှင် ရေအတွက်တံခါးအဆို့ရှင် ဂိတ်သုတ်အဆို့ရှင် ကြေးဝါအဆို့ရှင် နီကယ်ပြားအဆို့ရှင်
မူပိုင်ခွင့်© 2020 ZHEJIANG KINGSIR VALVE CO., LTD. All rights reserved ။